(Andrahand och inneboende)
Guri gacanlabaad lagu kireysto
(Hyra bostad i andra hand)
Kolka guriga laga kireysto qof guriga horey ugu kireysnaa oo heshiis la leh cidda guriga kireysa, waxaa kireyntaas lagu magacaabaa kirada gacanlabaadka.
Qofka guri ku kireynaya gacanlabaad wuxuu qorayaa heshiis gacanlabaad ah oo uu la galayo qofka kireysanaya. Heshiiskaasna waa in ay ku qoran yihiin kirada guriga laga bixinayo, inta heshiiskaasi jirayo iyo inta waqtiga u digiddu le’eg yahay. Qofka kireysanaya iyo kan kireynaya gurigu wuxuu mid waliba haysanayaa nuqul ka mid ah heshiiska la kala saxiixday.
Warqadda heshiiska gacanlabaadda waxaa laga iibsan karaa dukaamada lagu iibiyo buugagga amase waxaa laga soo guursan karaa Internet-ka.
Qofka guriga kireynayaa waa in uu ruqsad ka haysta cidda guriga iska leh in uu guriga gacanlabaad ku kireyn karo.
Haddii guriga ruqsad looga haysto cidda leh lagu kireysto gacanlabaad muddo ka badan laba sano, wuxuu qofka kireystay xaq u yeelan karaa inuu gurigaas la wareego haddii aan wax kale lagu heshiin. Taas oo micneheedu yahay in qofka gacanlabaadda ku kireysta uu guriga la wareegayo laba sano kadib oo loo qorayo heshiis gacankoowaad ah.
Haddii qofka guriga gacanlabaadda ku kireystay uu u arko in uu xaq u leeyahay inuu guriga la wareego balse uu diido qofka kireeyey wuxuu kireystuhu la xiriiri karaa Hyresnämnden. Hyresnämnden waxa weeye guddi dhexdhexaadiya khilaafka guryaha ka dhasha.
Guri qayb laga dego
Kolka guri qol ama qayb laga kireysto waxaa lagu magacaabaa inneboende.
Qofka kireynaya qol ama qayb guriga ka mid ah wuxuu qorayaa heshiis qayb-ka-degganaansho la galayaa qofka kireysanaya. Heshiiska guriga qayb laga dego waxaa kaloo lagu magacaabaa heshiiska qol alaabi taal. Heshiiskaasi wuxuu xasilooni siinayaa qofka kireeya iyo kan laga kireeyey labadaba. Heshiiskaasna waa in ay ku qoran yihiin inta kirada la bixinayaa le’eg tahay, waxa kirada ku jira, inta heshiiskaasi jirayo inta waqtiga u digiddu le’eg yahay. Qofka kireysanaya iyo kan kireynaya qayb ka mid ah gurigu waxay kala haysanayaan nuqul ka mid ah heshiiska la kala saxiixday.
Warqadda heshiiska kireynta qayb guri ka mid ah waxaa laga iibsan karaa dukaamada lagu iibiyo buugagga amase waxaa laga soo guursan karaa Internet-ka.
Kiro macquul ah
Qofka guri ku kireynaya gacanlabaad ama kireynaya qayb guriga ka mid ah waa in uusan sheegan kiro aad u sarraysa. Kiradu waa in ay ahaataa mid macquul ah kolka laga eego gurigu meesha uu ku yaal, dhulka uu ku fadhiyo, inuu dayactiran yahay iyo in alaabi taal.
Haddii qofka kireystaa uu bixiyo kiro xad dhaaf ah, wuxuu u ashtakoon karaa Hyresnämnden. Hyresnämnden waxay kolka eegayaan in kiradu macquul tahay iyo in kale, waxayna go’aamin karaa in qofka kireystay loo soo celiyo kirada qaarkeed.